प्राचीन ग्रीस मा, eloquently बोल्न सक्ने क्षमता कला मानिन्छ। तर, वर्गीकरण मुख्य रूप बाहिर मात्र krasnosloviem, कविता र अभिनय रचनात्मकता बीच लगे छ। लफ्फाजी मुख्य रूप शब्द र कविता, गद्य र eloquence को विज्ञान रूपमा व्याख्या। त्यो - एक कवि र शब्द को मास्टर। प्राचीन समय मा, लफ्फाजी सिकाउनुभयो। वक्ता भन्दा असाध्यै कवितात्मक प्रविधी गर्न resorted छन्, आफ्नो बोली को expressiveness बलियो गर्न एक दृश्य संग। आज, भाषण शैली निर्धारण गर्ने त्यसको आधारमा संचार क्षेत्र, संवाददाता eigenfunction मा: संचार, संचार र कार्य।
को लफ्फाजी विभिन्न thinkers हेर
चित्रकला र मूर्तिकला र वास्तुकला विज्ञान को कला likening rhetorical कौशल फेला धेरै पुरातन thinkers को विचार मा। तर यस्तो बयान अक्सर पत्यार पार्र्ने हेर्न। अक्सर आफ्नै बहिनी कला दृश्य र कविता रूपमा oratory छलफल। अरस्तू आफ्नो "लफ्फाजी" र "Poetics" तिनीहरूलाई बीच सामान्य कुरा फेला, को eloquence र कविता, तुलना। र सिसेरो, मा सार्वजनिक बयान अभिनय प्रविधी प्रयोग गरेर। को oratory रूपमा पछि बोली विधा कविता, oratory र अभिनय रचनात्मकता बीच जडान गठन। लफ्फाजी मा आफ्नो काम मा नै Lomonosov एम वी ( "प्रशंसक krasnosloviya फाइदाको लागि छिटो सुरु गाइड") सार्वजनिक बोल्ने को कलात्मक घटक को सर्व महत्व बारे वार्ता। यसको परिभाषा अनुसार, oratory अर्थ euphony, अर्थात् "सुन्दर बोल्नुहोस्।" शोभा र शब्द को शक्ति, जीवन्त, प्रतिनिधित्व उतेजित गर्नु र मानव नापसंद पूरा गर्न सक्षम द्वारा वर्णन गरे। कि वैज्ञानिक वक्ताले मुख्य उद्देश्य अनुसार छ। समान विचार "एक कवि र orator साँचो गुणहरू मा" पुस्तक Merzlyakov वायुसेना मा व्यक्त (1824)।
लफ्फाजी र कविता हाम्रो
Merzlyakov नै रचनात्मक काममा संलग्न मानिसहरूलाई रूपमा कवि र orator ठान्नुहुन्छ। यो उहाँले कवि र orator बीच एक तेज भिन्नता आकर्षित गर्दैन भन्ने संकेत गर्छ। सुवक्ता तत्व (एक लक्ष्य तर साधन) छ - कविता र krasnosloviya एक भाषण शैली छ जो एक निश्चित सम्बन्ध मा, उहाँले Belinskiy वी जी उहाँले कविता भनेर तर्क लेखे। रूसी अदालत प्रवक्ता Koni ए एफ साँचो रचनात्मकता, artistry रूपमा सार्वजनिक बोल्ने कला बारे लेखे र कविता को तत्व समावेश, orally व्यक्त गरे। उहाँले - एक रचनात्मक कल्पना हुनुपर्छ मानिस। कोनी अनुसार, कवि र orator भिन्नता तिनीहरूले एक हो र त्यही वास्तविकता दृश्य विभिन्न अंक देखि सुरु, आउने छ।
वाणी विधा के हो? बोलीको अवधारणा परिभाषित
को को श्रोता उद्देश्य जानकारी जटिल सामग्री हस्तान्तरण र कार्य गर्न उहाँलाई प्रोत्साहन वा - वाणी को सामान्य अवधारणा भाषण विभिन्न माध्यम, उद्देश्य जो को प्रयोग संग, यो भाषा समूह को अन्य सदस्यहरु संग अन्तरक्रिया उद्देश्य भाषा प्रयोग गतिविधि वक्ता रूपमा भाषाई शब्दकोश र सन्दर्भ पुस्तकहरू व्याख्या छ जवाफ। यो समय लिन्छ र एक ध्वनि (भित्र सहित) राख्नु वा लिखित। यस्तो गतिविधिहरु को परिणाम स्थिर स्मृति वा पत्र छ। यो प्राचीन थियो रूपमा आधुनिक अभ्यास oratory मा, कवितात्मक eloquence परे जान्छ। विधा भाषण उद्देश्य र हालतमा निर्धारित। बोली प्रत्येक प्रकार को लागि समय निर्देशन र शैलीहरू अनुसार वर्गीकृत गरिएको छ जो आफ्नो विधाहरू, चिन्ह लगाइयो। यो सांस्कृतिक फारम भाषण कथन प्रतिरोधी प्रकार एउटा विषय, एक stylistic प्रकृति र संरचना भएको।
सार्वजनिक बोल्ने को प्रकार (आवाज) विधा
आधुनिक विज्ञान मा, भाषण विधा निम्नानुसार वर्गीकृत छन्: सामाजिक-राजनीतिक, शैक्षिक, न्यायिक, कल्याण, चर्च र Theological (आध्यात्मिक)। बोली विधा को प्रकार यसको सिस्टम विश्लेषण मा बोली भइरहेको विशेषताहरु को एक विशेष वस्तु र यस्तै मूल्यांकन द्वारा विशेषता छ।
वर्गीकरण स्थिति र विषयगत वर्ण छ। यो स्थिति, विषय र आफ्नो उद्देश्य को प्रदर्शन खातामा लाग्छ। सामाजिक-राजनीतिक चासो: को, सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक र नैतिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय, सारांश रिपोर्ट, कूटनीतिक, सैनिक र देशभक्ति rallies, agitatorial संसदीय मा प्रदर्शन। एक विशेष ठाउँ चर्च र Theological जीवनमा आध्यात्मिक लफ्फाजी पर्छ। यसलाई धार्मिक विषयवस्तुहरू प्रस्तुति र पदोन्नति लागि महत्त्वपूर्ण छ।
Theological र औपचारिक शैलीहरू
oratory को चर्च-Theological शैली द्वारा समावेश भाषण विधाहरू प्रकार सहित प्रचार, अभिवादन, अबिच्येरीयस्, साक्षात्कार, प्रवचन, अक्षर, Theological विद्यालय मा, मिडिया (पादरीहरूले व्यक्ति) बोल्दै लेक्चर। यो विधा विशेष छ: विद्यार्थी सामान्यतया विश्वासीहरूले हुन्। शीर्षकहरू भाषण धर्मशास्त्रको लिइएका, मण्डली पिता र अन्य स्रोतबाट को लेखोटहरू। सरकारी, व्यापार र सुविधाहरू भालु भन्ने विधा प्ले शैक्षिक शैलीहरू। यो प्रणाली आधारित छ आधिकारिक कागजातहरू अस्तित्व implies। विशेष जानकारी हाइलाइट गर्न - यस्तो कुरा उद्देश्य जो देश मा स्थिति, विश्व घटनाहरू, विश्लेषण केन्द्रित छ। तिनीहरूले, राजनीतिक आर्थिक र अन्य यस्ता तथ्यहरू, घटना, सिफारिसहरू, गरेको काम मा रिपोर्ट को मूल्यांकन समावेश। नियम, तिनीहरूले वास्तविक समस्या समर्पित छन् वा कल, यस कार्यक्रम को सैद्धान्तिक प्रकृतिको व्याख्या embody।
चयन र भाषाई स्रोतहरू प्रयोग
यस मामला मा, सबै महत्वपूर्ण विषय र लक्ष्य सेट प्रदर्शन को पहिलो। केही राजनीतिक भाषण impersonality वा कमजोर अभिव्यक्ति, रंग पुस्तक, राजनीतिक शब्दावली, प्राविधिक सर्तहरू (जस्तै, आर्थिक) implies जो औपचारिक शैली, यस्तै छ भनेर stylistic सुविधाहरू द्वारा विशेषता। यी सुविधाहरू भाषण विधा को सुविधाहरू चिनारी र इच्छित प्रभाव हासिल गर्न (दृश्य, भावनात्मक) को प्रयोग निर्धारण। उदाहरणका लागि, मस्यौदा प्रतिवेदन एक सभामा वर्ण छ, तर यो colloquial शब्दावली र विन्यास को प्रयोग संग बाहिर छ। एक हडताली उदाहरण (राज्य 03/15/1910 को को परिषद वितरित) "समुदायको छोड्न किसानहरु को दायाँ" प्रश्न Stolypina पी ए हो
शैक्षिक र न्यायिक eloquence
यस शैक्षिक oratory लागि अलग भनेर गहिरो argumentativeness, तर्क र संस्कृति वैज्ञानिक worldview प्रकार कोर्न मदत, बोलीले विशेषता छ। यी विश्वविद्यालयहरु मा लेक्चर, अनुसन्धान रिपोर्ट र समीक्षा (पोष्टहरू) समावेश गर्नुहोस्। निस्सन्देह, भाषा शैली शैक्षिक oratory वैज्ञानिक नजिक छ, तर यो अक्सर expressive र दृश्य उपकरण प्रयोग गरिएको छ। उदाहरणका लागि, शिक्षाविद् Nechkin गर्ने पूर्ण बोल्न रूसी एक मास्टर रूपमा Klyuchevskoi बारेमा लेख्छन्। Kliuchevskoi शब्दावली यो पुरानो कागजातहरू को विशिष्ट रहन अभिव्यक्ति संग साहित्यिक भाषा को धेरै शब्दहरू, लोकप्रिय क्रांतियों, उपदेश पाउन सम्भव छ भनेर धनी। रूसी माटो मा शैक्षिक eloquence को XIX सताब्दी को शुरुवात मा गठन भएको थियो। र यो सार्वजनिक र राजनीतिक चेतना Awakening उद्देश्य थियो। उन्नत oratorical प्रदर्शन को लागि मंच विश्वविद्यालय विभाग भयो। यो कारणले गर्दा तथ्यलाई छ 40-60 वर्ष मा छ। तिनीहरूले प्रगतिशील युरोपेली विचार विशेषता द्वारा थिए जो जवान वैज्ञानिकहरू, द्वारा काम गर्न आए। Granovsky, Soloviev, खण्डहरू, Mendeleev, सम्राट Osvoboditel, Timiryazev, Vernadsky Fersman, Vavilov - आफ्नो भाषण संग दर्शक charmed गर्ने lecturers।
न्यायिक वक्ता कला दर्शक मा लक्षित र प्रभावकारी प्रभाव प्रदान गर्न छ। आवंटित: मुद्दा चलाउने व्यक्ति (को अभियोजन) र वकील (रक्षात्मक) बोली।
फाराम को किसिम
भाषा को प्रयोग को प्रकृति र रूप को विविधता मानव गतिविधि धेरै प्रकारका उपस्थितिको कारण हो। बयान को प्रकार लिखित र मौखिक छन्। तिनीहरूले कारण सामग्री, शैली, उपकरण (शब्दावली, phraseology, व्याकरण), संरचना गर्न विशेष क्षेत्र अवस्था र समस्या प्रतिबिम्बित। प्रयोग स्कोप यसको विधाहरू र प्रकार उत्पादन गर्छ। यी उपभोक्ता संवाद, कथा, लेखन, अर्डर व्यापार कागजातहरू समावेश गर्नुहोस्।
Heterogeneity कथनहरू को सामान्य प्रकृति निर्धारण मा कठिनाई सिर्जना गर्छ।
भाषण विधाहरू माध्यमिक र प्राथमिक (सरल र जटिल) मा विभाजित छन्। जटिल - (ज्यादातर साहित्यिक काम, वैज्ञानिक लेख, आदि) लेखिएको छ। सरल - संचार भाषण मार्फत। तपाईं केवल प्राथमिक ध्यान भने, समस्या को "vulgarization" को अवस्थामा हुनेछ। मात्र एकता दुई प्रकार को अध्ययन भाषाई र philological मूल्य छ।
विधाहरू Bakhtin को समस्या
पारंपरिक (राष्ट्रिय) र व्यक्तिगत शैलीहरू को अनुपात - यो समस्याग्रस्त मुद्दा बयान। शैली परिचित गर्न, तपाईं विधा (वाणी) अध्ययन को प्रश्न गर्न जिम्मेवार दृष्टिकोण लिनु आवश्यक छ। हामी मात्र व्यक्तिगत बोल्ने मान्छे (अभिनेता) को ठोस मुखबाट निस्केको वचन को रूप मा वास्तविकता मा अवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई, Bakhtin बताए। भाषण विधाहरू संचार को एक वास्तविक एकाइ रूपमा अवधारणा मा आफ्नो विचार को आधार हो। Bakhtin अनुसार, यो एक बयान को रूप मा डाली, र बिना यो त्यहाँ अवस्थित सक्दैन। बोली विषयहरू को परिवर्तन - यो कथन को पहिलो सुविधा। दोस्रो - यो पूर्णता (निष्ठा), एक जडान छ जो छ:
बोली आशय (इच्छा वक्ता);
फाराम पूरा, विशिष्ट रचनाहरूको र पूरा विधा।
विधा योजना कथन शब्दावली को विकल्प असर। MM Bakhtin प्रकारका विधा ठूलो महत्त्व संलग्न गर्दछ। धेरै सुरुदेखि विधा को पहिचान मार्फत हामी सारा बोली एक अर्थमा संवाद छ। यो संचार बिना कठिन र असम्भव हुनेछ।
मौखिक - यो एक व्यक्ति सुन्नुहुन्छ भन्ने बोली छ। यस मामला मा, यो केवल ती उहाँलाई नजिक छन् कि "ध्वनि तस्बिरहरू", स्पष्ट छन् चयन। अरू सबै कुरा "बहिरा कान" तिनीहरूले भन्न रूपमा, स्किप। किनभने भाषण धाराको सबै शब्दहरू, अन्य पछि हालको एक, तस्बिरहरू गर्न वृद्धि metonymy, निकटता, तर्क को सिद्धान्त मा दिन यो आवश्यक छ। संचार निम्न मौखिक बोली विधाहरू प्रयोग गर्दछ:
कुराकानी - आदानप्रदान वा अन्य जानकारी;
compliments - प्रशंसा interlocutor, जसको उद्देश्य - उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन;
कथा - को interlocutors को एक, जो उद्देश्य द्वारा एक स्वगत - घटनाको कथा, घटना, आदि;।
कुराकानी - भाषण उद्देश्य interlocutor, सूचित गर्न स्पष्ट वा सम्बन्ध पत्ता लक्ष्य लिएको छ जो;
विवाद - सत्य फेला उद्देश्य एक संवाद।
यो लेखन, आफ्नो नियमहरू जस्तै orally छ। कहिलेकाहीं यस्तो अधूरा बयान, कमजोर संरचना, दखल, reprises र त्यस्तै वस्तुहरू रूपमा भाषण कमीकमजोरी, केही - सफल र प्रभावकारी परिणाम लागि आवश्यक सर्त हो।
वाणी विधाहरू मा संवाद
यो संवाद वाणी विधा "paralinguistic" हालतमा को व्याख्या लागि आवश्यक को अनिवार्य प्रयोग सँगसँगै छ। दैनिक-उपभोक्ता संवाद - "मिश्रित" को लागू जो भाषा, दुनियाँमा छ संचार समारोह गैर-भाषाई हालतमा नजिक जडान मा। भाषण मार्फत संचार को एक विशेषता सुविधा एक संवाद सिद्धान्त हो। यो संचार भूमिकाको राज्य एकान्तरण छन् भन्ने हो (भूमिका सहनुपरेको छ)। औपचारिक, यो जस्तो देखिन्छ: एक भन्छन् - दोस्रो सुन्न। तर यो व्यावहारिक शुद्ध रूप मा उत्पन्न गर्दैन एक आदर्श योजना छ। सुन्नुहुन्छ अक्सर निष्क्रिय रहन्छ वा पज अनुहार अभिव्यक्ति, इशाराहरू (paralinguistic भरिन्छ संचार को माध्यम)। उपभोक्ता संवाद यस्तै छ भनेर विशेषताहरु:
छलफलमा मुद्दाहरू एक विस्तृत विविधता;
को छिटो परिवर्तन;
संवादी शैली ;
लक्ष्य को कमी;
भावनात्मक र expressive।
oratory को कला सिक्न। यो हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ!
कसरी सही र सुन्दर बोल्न सिक्न
कसरी कपाल आफैलाई मा के Ombre? चित्रकला उपकरण
Eddi Irvayn: क्यारियर र फोटो
एक बच्चा मा मुखशोथ कसरी व्यवहार गर्ने?
नङ लागि acrylics प्रयोग गरेर डिजाइन मा?
मास्को मा Shukhov टावर, ठेगाना, उचाइ, फोटो
आणविक हतियार र यसको प्रजाति
कसरी फोम बाहिर शिल्प आफ्नो हातले बनाउन